Praiminisitra Mahafaly S. : “Ilaina ny fifanajana sy ny lalàna” | NewsMada
Praiminisitra Mahafaly S. : “Ilaina ny fifanajana sy ny lalàna”
Nandravona ny disadisa, tamin’ny fanamafisana ny dinam-paritra, momba ny fandriampahalemana sy fihavanana, tany amin’ny kaominina Mahabo Mananivo, distrikan’i Farafangana ny delegasiona notarihin’ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier, afakomaly 23 marsa 2017. “Misy zavatra roa lehibe tsy maintsy hajaina sy tandrovana amin’ny fiaraha-monina. Ny fisian’ny fifanajana sy ny fanajana ny lalàna. Ao anatin’izany fifanajana izany ny fifampihainoana, ny fifandeferana, ny fahaizana mifananatra sy mifanampy. Tsy mifampitsikera fotsiny fa atao ny hisian’ny fifampihavanana mba hampirindra ny fiarahamonina. Natao hanampy matoa napetraka sy manatona ny vahoaka ny fitondrana. Ilaina ny fananana dinam-paritra tena mifanaraka amin’ny lalàna. Ny fifanatonana no ahafahana mamaha ny olona”, hoy izy.
Nankasitraka ny lehiben’ ny dina sy ny ampanjaka tamin’ny fampandeferana ny hambompo ka nitondra avo ny firaisankina maha Malagasy ny lehiben’ny governemanta. “Antony nahatongavana aty izany mba hametrahana ny mety ho disadisa eo amin’ny fitondrana sy ny vahoaka ka miverina amin’ny laoniny ny firaisankina nanomboka androany ary eo akaikin’ny vahoaka mandrakariva ny fitondram-panjakana”, hoy ihany izy.
Nohamafisiny fa tsy misy olona tsimatimanota izany eto. Tsy maintsy ampiharina amin’ny olona rehetra ny lalàna. Tsiahivina fa nanolotra omby iray sy vola 5 tapitrisa Ar ho an’ny vahoaka ny fitondrana ho amin’ny fampihavanana.